ဒိန်းမတ်ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်း Start ကိုဒိန်းမတ်ကုမ္ပဏီ
ဒိန်းမတ်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဆွဲသွင်းပါဝင်ရှာသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကလူများအတွက်ရေပန်းစားရွေးချယ်မှုဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ဒီလူကြိုက်များများအတွက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာချင်သောသူတို့အားကမ်းလှမ်းအများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ် ဒိန်းမတ်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်ဒါမှမဟုတ် Dane ကထားအဖြစ်, Start virksomhed.
ဒိန်းမတ်လူနေမှုအလွန်မြင့်စံရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒိန်းမတ်ဒီတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်းဆွဲသွင်းပါဝင်ရှာကြံအများအပြားကန့်သတ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေအကျိုး။ ခိုင်ခံ့ကျန်းမာစီးပွားရေးကိုအတူတစ်ဦးကတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ပိုပြီးကမ်းလွန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများငွေရေးကြေးရေးအကြိုးရှာနေဆွဲဆောင်နှင့်ဒိန်းမတ်ဆက်ဆက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ကဒီမဟာဗျူဟာကိုအားကောင်းနိုငျသောဒေသဖြစ်ပါတယ်။ (အယ်ဒီတာရဲ့မှတ်စု: ။ တကယ်တော့ဒီကုမ္ပဏီကအလုပ်ခန့်ခြင်းနှင့်ဤဆောင်းပါးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကိုပင်ဟေဂင်, ဒိန်းမတ်လက်ရှိဖြစ်ပါသည်သူအယ်ဒီတာ) ကအစိုးရယူဆောင်ခံရဖို့နိုင်ငံခြားပိုက်ဆံအားပေးအဖြစ်ထို့အပွငျ, ဒိန်းမတ်, နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုအထောက်အကူပြုဖို့အတွက်အလွန်ဖော်ရွေနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ထိုကဲ့သို့သောထောက်ပံ့ငွေ, ချေးငွေနှင့်ကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်အခွန်လျှော့ချအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောမက်လုံးပေးခွငျးဖွငျ့ပွညျသို့။
ထို့အပြင်ဤအရေးအသား၏အဖြစ်, ကမ္ဘာ့ဘဏ်စကေးက "စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတာ၏လွယ်ကူ on", (ရုံနယူးဇီလန်နှင့်စင်္ကာပူပြီးနောက်) ဥရောပတိုက်တွင်ပထမဦးဆုံးနှင့်ကမ္ဘာအတွက်အကောင်းဆုံးတတိယအဖြစ်ဒိန်းမတ်အဆင့်။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သော Forbes မဂ္ဂဇင်းအဖြစ်မဂ္ဂဇင်းနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများများအတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးနေရာဒိန်းမတ်ခေါ်ပြီ။ သိသာထင်ရှားတဲ့, ဒီဂုဏ်သတင်းကိုဤမျှလောက်များစွာသောကမ်းလွန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည်လက်ရှိတွင်ဒိန်းမတ်၌ထအကွေ့အကောက်များသောနေကြသည်ရုံအဘယ်ကြောင့်သရုပ်ပြကူညီပေးသည်။
ဒိန်းမတ်အတွက်ထည့်သွင်းဖို့ရွေးချယ်ရာတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူတို့အဘို့ process ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အစာရှောင်ခြင်းမှတ်ပုံတင်ရေး protocol ကို။
တစ်ဦးနေထိုင်လိုအပ်ချက်သည့်အခါမျှမရှိကြောင်းဒိန်းမတ်အတွက်ထည့်သွင်းဖို့ရှေးခယျြရာတှငျလူများအတွက်နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူး ဒိန်းမတ်အတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းတက် setting။ ဤအချက်ကိုဒါရိုက်တာ၏ CEO ဖြစ်သူနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုအသက်ရှင်နိုင်ဆိုလိုသည်။
Notarized ကငျြ့လုပ်ငန်းစဉ်ပိုမိုရိုးရှင်းဖြည့်စွက်, ဒိန်းမတ်အတွက်ကမ်းလွန်ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ဘို့မလိုအပ်ပါဘူးဖြစ်ကြသည်။
ဒိန်းမတ်အတွက်မှတ်ပုံတင်ကြေးဘာသာစကားလိုအပ်ချက်များကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထည့်သွင်းဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း, ကနေဒါသြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်များအတွက်အမှုအရာအများကြီးပိုလွယ်အောင်, အင်္ဂလိပ်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ခံရဖို့စာရွက်စာတမ်းများအချို့အဘို့ခွင့်ပြုပါကြဘူး။
နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူတစ်ဦးထည့်သွင်းရန်ရှာစေခြင်းငှါ, အခြားအတရားစီရင်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လိုက်တဲ့အခါ, ဒိန်းမတ်ကော်ပိုရေးရှင်းကကူညီများစွာအခွန်-ထိရောက်သောဥပဒေများပေးထားပါတယ်။
သူတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအလေ့အကျင့်ကိုစတင်ရန်ဒိန်းမတ်အတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ်ဌာနခွဲရုံးကဖွဲ့စည်းသင့်တယ်လျှင်အတော်များများကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များတွေးမိ။ နှစ်ခုစိတ်ကူးများနှိုင်းယှဉ်သောအခါ, အခြေအနေအဖြစ်မှန်ကဌာနခွဲရုံးကိုနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းတည်ထောင်ရန်ပုံမှန်အားဖြင့်အများကြီးပိုပြီးလွယ်ကူဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကကော်ပိုရေးရှင်းအသစ်တခုပုံစံတင်ပို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကဒိန်းမတ်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်နိုင်အောင်ဌာနခွဲရုံးတခုကိုပြီးသား-ဖွဲ့စည်းခဲ့နိုင်ငံခြားကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာပြုလုပ်ဒိန်းမတ်အတွက်ထည့်သွင်းဖို့ထက်ဘဏ်ခွဲဖွဲ့စည်းရန်အများကြီးမြန်လွယ်ခြင်း, စျေးနှုန်းသက်သာသည်။ တစ်ဦးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တစ်ဦးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန့်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဖို့အဆင်သင့်ရှိနိုင်ပါသည်။ နှိုင်းယှဉ်မှု၌, အခက်ဖွဲ့စည်းပိုပြီးကုန်ကျမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်ဖြစ်ပြီး, ကိုလည်းစစ်ဆင်ရေးဒိန်းမတ်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့မီဖြည့်စွက်ဖို့အများကြီးရက်သတ္တပတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
အစားဌာနခွဲတစ်ခုကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်းကိုလည်းဒိန်းမတ်၌အခြားသောအခွင့်အလမ်းများအတွက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒိန်းမတ်အခွန်ဥပဒဒိန်းမတ်အတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကမ်းလွန်လက်အောက်ခံဒိန်းမတ်အတွက်အခွန်များအကြောင်းမဲ့မည်မဟုတ်ပါဆိုထားသည်။ ဒိန်းမတ်အတွက်အခက်ဌာနချုပ်ဖွဲ့စည်းတဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့ Nordic တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဆန့်ကျင်အဖြစ်ဌာနချုပ်ဒိန်းမတ်ဖွဲ့စည်းလျှင်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီနှစ်ဆအခွန်ကောက်ခံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များမှရှောင်ရှားရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများကုမ္ပဏီ၏စာရွက်စာတမ်းများရေးဆွဲမီ, နာမည်တစ်ခုစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏အမည်အားဒိနျးမတျမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူကစစ်ဆေးနေခြင်းဖြင့်ထူးခြားသောဖြစ်လိမ့်မည်သေချာ၏ခြေလှမ်းကိုယူရမည်ဖြစ်သည်။
ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီဒါဟာအစဝန်ဆောင်မှုစာတမ်းများနှင့်အခြားအရေးကြီးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစာရွက်စာတမ်းများကိုအပ်စေခြင်းငှါအဘယ်အရပ်ဒိန်းမတ်အတွက်တည်နေရာတစ်ခုပေးရမညျထဲဆွဲသွင်းပါဝင်၏လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူသူတို့ကိုကူညီပေးဖို့မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်ဆီအကူအညီတောင်းဖို့သေချာပါစေရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ (ထိုကဲ့သို့သောဒီတစ်ခုကဲ့သို့) တစ်ဦးအေးဂျင့်ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ထို့နောက်သင့်ရဲ့အေးဂျင့်အသင်းအဖွဲ့များ၏ဆောင်းပါးများရေးဆွဲရမည်ဖြစ်သည်။ ဒိန်းမတ်မှာတော့အသင်းအဖွဲ့များ၏ဆောင်းပါးများကုမ္ပဏီ၏မျှော်လင့်ထားလေ့အကျင့်များ Layout ။ ပုံမှန်အားဖြင့်, အသင်းအဖွဲ့များ၏ဆောင်းပါးများကိုဤကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ရုံး၎င်း၏စုစုပေါင်းကုမ္ပဏီရည်မှန်းချက်များနှင့်ဒိန်းမတ်အတွက် operating နေစဉ်ကုမ္ပဏီအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံပါလိမ့်မယ်ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများသည်အဘယ်မှာရှိအတွင်းပိုင်းစည်းမျဉ်းများ, ကုမ္ပဏီ၏အမည်, အဖြစ်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ထိုကုမ္ပဏီ၏ရှယ်ယာမြို့တော်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အဖြစ်စီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပတ်သက်. နောက်ခံသတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့ရပါမည်။ အသင်းအဖွဲ့များ၏ဆောင်းပါးများတင်သွင်းခြင်းမပြုမီ, ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီဆောင်းပါးများကို notarized ရရမည်ဖြစ်သည်။
တိုင်းကုမ္ပဏီဒိန်းမတ်အတွက်မှတ်ပုံတင်ဖို့တစ်ခုမှာထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်အဖြစ်ပြုမူသည့် NemID (စာသား, "လွယ်ကူ ID ကို") ၏ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ အဆိုပါ NemID လုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီပြီးတော့ဘဏ်အကောင့်ထဲသို့ဖော်ပြထားနိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်နေရာနှင့်ဤသိုက်သိုက်များ၏လက်မှတ်ပေးခွငျးအားဖွငျ့အရပျကိုလုယူသောသကျသပွေပြောင်းရွှေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့အေးဂျင့်မှတ်ပုံတင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးမြောက်ရန်, သင့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, အသင်းအဖွဲ့များ၏ဆောင်းပါးများတင်ပြအဖြစ်ဘဏ်အပ်ငွေလက်မှတ်ဖြည့်စွက်ပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးစာရွက်စာတမ်းများပေးအပ်မှတ်ပုံတင်များအတွက်အများဆုံး turnaround, ပြီးစီးခဲ့နှင့်မှန်မှန်ကန်ကန်တင်သွင်း, ပုံမှန်အားဖြင့်တဦးတည်းနှစ်ခုမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်နေကြသည်။ အခွန်အာဏာပိုင်များနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးစီးဖို့, turnaround များသောအားဖြင့်သုံးရက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်သင့်လက်မှာရှိတဲ့စာရွက်စာတမ်းများအရရေကြောင်းအချိန်မပါဝင်ပါဘူး။
သင့်ကုမ္ပဏီဒိန်းမတ်အတွက်န်ထမ်းရှိပါတယ်လျှင်, သင်တဦးတည်းနောက်ဆုံးမှတ်ပုံတင်ခြေလှမ်းဖြည့်စွက်ရပေမည်။ သင်သည်သင်၏န်ထမ်းများအတွက်ပုဂ္ဂလိကအာမခံကုမ္ပဏီ, ပုံမှန်အားဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအပိုဆောင်းတစ်ရက်ကထပ်ပြောသည်တစ်ဦးခြေလှမ်းနှင့်အတူသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း entity မှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။